DRSP Vakinankaratra : mitetim-bidy 1 049 000 000 Ar ilay birao vaovaon’ny polisy - ewa.mg
DRSP Vakinankaratra : mitetim-bidy 1 049 000 000 Ar ilay birao vaovaon’ny polisy
News - DRSP Vakinankaratra : mitetim-bidy 1 049 000 000 Ar ilay birao vaovaon’ny polisy
Trano lehibe misy efitra 31 ka ny
21 amin’ireo, birao fiasana miampy efitra lehibe iray fanaovana
fivoriana, efitra fitanana olona, misy an’ny tsy ampy taona sy ny
ampy taona. Izany ny trano vaovao fiasan’ny Fitaleavam-paritry ny
filaminana anatiny eo anivon’ny faritra Vakinankaratra izay
notokanana, omaly. Fotodrafitrasa mitentim-bidy 1 049 000 000 Ar.
To­nga nitokana izany tamin’ny fo­mba ofisialy ny Filoham-pirenena
Andry Rajoelina. «Zava-dehibe ny fijoroan’ny fotodrafitrasa toy
izao satria mendrika ny hiasa amin’ny trano manara-penitra toy izao
ny mpitandro fi­la­minana, indrindra mendrika ho­raisina amin’ny
birao tsara ny vahoaka manan-draharaha atao», hoy ny Filoha
Rajoelina. Nambaran’ny minisitry ny Fi­laminam-bahoaka, ny
contrôleur général de police Randri­a­na­ri­son Fanomezantsoa fa
mipetraka eo amin’ny tantaran’ny polisim-pirenena ny datin’andro
an­droany (omaly io) satria tao anatin’izay 59 taona nijoroan’ny
polisim-pirenena malagasy izay, tsy mbola nisy fananganana
fo­todrafitrasa manara-penitra toy izao.
L’article DRSP Vakinankaratra : mitetim-bidy 1 049 000 000 Ar ilay birao vaovaon’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 29/08/2020
Toamasina: 23 mianadahy niofana ho an’ny fizahantany
Namoaka 23 mianadahy, misehatra amin’ny fizahantany, ny sekoly tsy miankina Ariane Tour, ny asabotsy 20 jolay teo. Nitondra ny anarana hoe “Ravinala” ity andiany ity, niofana nandritra ny roa taona taorian’ny fahazoany ny diplaoma bakalorea.Azo adika fa avo lenta ny fiofanana satria ambony ny salanisa azon’ireo mpiofana. Nahazo naoty 19,76/20 ny voalohany, 19,5/20 ny faharoa ary 19,1% ny fahatelo.Nambaran’ny mpampiofana, mpanorina sady talen’ny sekoly fa maro ny taranja nianaran’izy ireo, mahafeno ny fepetra takin’ny fikirakirana ny fizahantany. Toy ny fandrahoana sakafo, ny fandraisana olona, ny fandrosoana sakafo, ny fitarihan-dia, ny fandikan-teny, ny fikarakarana efitrano, ny sns. Nanao fitsidiham-paritra ihany koa izy ireo nandritra ny fiofanana, niampy fanarahana zotram-pizahantany (circuit touristique).Notsoriny koa fa olana eto amintsika ny tsy fisian’ny sekolim-panjakana mampiofana toy izao, indrindra any amin’ny faritra, nefa any amin’ny faritra no tena toerana mahaliana ny mpizahatany eto Madagasikara. Mba tokony ho mora kokoa amin’izay ny saram-pianarana satria mbola midangana ny an’ny sekoly tsy miankina.Sajo sy Njaka A.L’article Toamasina: 23 mianadahy niofana ho an’ny fizahantany a été récupéré chez Newsmada.
Ambanidia: tratra ny halatra ranon’ny Jirama
Nidina tampoka teny ifotony ny Fitantanana ny fiarovana ny fidiram-bolan’ny rano (DPRO) ao amin’ny Jirama, omaly maraina teny Miandrarivo Ambanidia. Tratra ny fangalarana rano ataon’ny ramatoa iray, A.Volatiana ao an-tokantranony. Niaiky ny halatra nataony izy, ary nolazainy fa efa tao anatin’ny roa taona ny fangalarany ranon’ny Jirama, tsy miankina amin’ny kaontera. Amidiny 50 Ar ny iray daba mavo (jerricane) amin’ny olon-kafa ny rano avy eo, ary milahatra toy ireny amin’ny paompin-drano ho an’ny daholobe ireny mihitsy ny ao aminy. Misokatra amin’ny 5 ora sy sasany maraina hatramin’ny 8 ora maraina ny fivarotany rano, sy amin’ny 5 ora sy sasany hariva hatramin’ny 8 ora alina. Nandritra ny valo volana no nivarotany rano tamin’ny mponina manodidina.Nohararaotiny tamin’ny fotoana nisy fantsona vaky nahafahany namily ny ranon’nyJirama, nakao an-tranony.Handoa ny sarany sady hotoriana Nijery ny zava-misy teny an-toerana ny mpitantana ny orinasa Jirama, notarihin-dRandriamanana Henri, Tale Jeneraly lefitra, notronin’ny vaditany. Nambarany fa, tsy azo leferina ny halatra toy izao, satria miteraka fatiantoka goavana ho an’ity orinasam-panjakana ity, indrindra, mahatonga ny tsy fahampian-drano amin’ny tokantrano maro eto an-dRenivohitra. Noho izany, hanery ilay tokan-trano hanefa ny sarany tokony honerany amin’ny Jirama, ny mpitantana ny orinasa sady hampiakatra ny raharaha eny amin’ny fitsarana. Hosazina ihany koa izay mpiasan’ny Jirama voatonontonona tamin’izao raharaha halatra rano izao.Njaka A.L’article Ambanidia: tratra ny halatra ranon’ny Jirama a été récupéré chez Newsmada.
Hiragasy makotrokotroka: nafana ny andro voalohany
Vavany avy hatrany! Tsy nifampitsitsy fa samy nanao izay ho afany ny tarika Ramadison Anosimanjaka sy ny tarika Ratovoson Ampahimanga, omaly nandritra ny fanokafana ny hetsika « Hiragasy makotrokotroka » eny amin’ny Rovan’Antananarivo. Na teo amin’ny fomba fiseho na tany amin’ny fomba fanehoana ny hafatra ampitaina, samy tsapa ho niezaka mafy nisarika ny mason’ny mpijery sy ny mpitsara ny tarika tsirairay.Raha ny fandaharam-potoana manaraka, any Alarobian’i Manjakandriana indray no hanohizana ny « Hiragasy makotrokotroka », ny 11 aogositra izao. Hitohy any Sambaina izany, ny 18 aogositra. Eny Talata Volonondry ny 25 aogositra. Hiazo ny Fidasiana Rovan’Ambohimanga kosa ny 1 septambra.Marihina fa ny 6 oktobra izao, eo amin’ny lapan’ny Tanànan’Antananarivo, etsy Analakely, ny famaranana sady hanolorana ny amboara ho an’izay mendrika izany.HaRy RazafindrakotoL’article Hiragasy makotrokotroka: nafana ny andro voalohany a été récupéré chez Newsmada.
Nanampy ny Akany: enfants de joie ny Freedom
Nitsidika ny Akany Enfants de joie ao Andranomadio Toamasina ny filoha nasionalin’ny antoko Freedom, Andriatongarivo Lalatiana, ny faran’ny herinandro teo. Reny mpiahy ity akany ity rahateo ny tenany. Miisa 33 ireo zaza kamboty taizana ao, ary mpianatra 400 kosa ireo ampianarina ao amin’ny sekoly, miankina amin’ny akany ary mampianatra ireo zaza sahirana ihany koa.Nanolotra kojakojam-pianarana ho an’ireo mpianatra ireo, ahitana boky isan-karazany sy vata fahitalavitra iray ahafahan’ireo zaza mijery ireo fandaharana samihafa sy miala voly ny antoko.Sahirana ity foibe ity. Miankina amin’ireo malala-tanana ny fampihodinana azy. Mpilatsaka an-tsitrapo ny ankamaroan’ireo mpampianatra sy ny tompon’andraikitra ao. Nampanantena ny hifanome tanana araka ny vitany ny mpanorina ny Freedom hanarenana ny foibe, tena simba sy tsizarizary tanteraka.Nankasitraka ny fahafoizan-tena asehon’ny talen’ny akany sy ny vadiny ny filoha nasionalin’ny Freedom. Eo ny fanampiana ireo kamboty na narian’ny ray aman-dreniny, ireo zaza sahirana mianatra ao amin’ny sekoly koa. Manampy ireo, misy vehivavy telo narian’ny vadiny sy lehilahy manano tena koa mipetraka ao amin’ny akany nefa mamelon-janaka irery avokoa. Horaisin’ny Freedom an-tanana ny fanampiana azy ireo.Synèse R.L’article Nanampy ny Akany: enfants de joie ny Freedom a été récupéré chez Newsmada.
Andrianainarivelo Hajo – Fifidianana loholona: « Tsy azo ekena ny faneriterena sy ny fibaikobaikoana »
Nanafatrafatra ireo olom-boafidy eny ifotony na ireo ho mpifidy vaventy ny filoha nasionalin’ny antoko Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo. Nohitsiny fa misy fomba ratsy tsy tokony haverina intsony amin’izao.Nambarany fa fanohizana ny ezaka efa natomboky ny antoko sy ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana tena izy, efa niadiana hatramin’izay izao firotsahana an-tsehatra amin’ny fifidianana loholona izao. « Mbola mitohy izany ady amin’ny hametrahana ny fitsinjaram-pahefana izany mba ho fototry ny fampandrosoana eto amin’ny firenena », hoy izy. Nanteriny fa efa zary ny fomba fiasainana eo anivon’ny antoko, araka ny anarany « Malagasy miara-miainga » ny miady ho amin’ny tombontsoa imbonana. Nihaona amin’ireo olom-boafidy, ahitana ben’ny Tanàna sy mpanolotsaina avy amin’ny firehana samihafa eny Atsimondrano izy ireo tamin’izany. Notsindriny fa sarotra ny hampandrosoana ny firenena rehefa tsy hiarahana izany na koa mitanila. Nanafatrafatra ireo mpifidy vaventy ny tenany avy eo. « Aoka tsy hatahotra ny haneho ny safidy ianareo. Malalaka izany. Tokony hirotsaka ireo mitady hibaikobaiko na hanindry anareo ireo raha sahy… Tsy ekenay mihitsy ny faneriterena sy ny fibaikoana ny mpifidy raha tena hanaja ny safidim-bahoaka », hoy izy. Notsiahiviny fa nanahirana amin’ny fitantanana teto amin’ny firenena ny olom-boatendry mibaiko olom-boafidy.Vonona hihaino ny eny ifotony ny MMMNaneho fahavononana kosa ny kandidà loholona avy amin’ny antoko. « Lehibe ny adidy miandry anareo ary tompon-tsafidy sy tompom-pahefana amin’ny hoavin’ny kaominina. Tsy manavaka izahay ary vonona ny hihaino ny feonareo. Hiaraka hifanome tanana sy hitondra fampivoarana ny kaominina ho any amin’ny fampandrosoana isika », hoy ny lohalisitry ny MMM, Rakotondrainibe Michel. Nanteriny fa mandroso ny firenena rehefa mandroso ny faritra sy ny eny anivon’ny kaominina. « Miakatra ny fari-piainan’ny Malagasy », hoy izy.Synèse R.L’article Andrianainarivelo Hajo – Fifidianana loholona: « Tsy azo ekena ny faneriterena sy ny fibaikobaikoana » a été récupéré chez Newsmada.
Anosy: tratra ilay lehilahy nandona olona tamin’ny fiara
Niharan’ny lozam-pifamoivoizana teny Anosy, ny alahady 21 septambra lasa teo, ny raim-pianakaviana iray 51 taona. Nitondra moto izy ka nandalo teo Anosy no nisy fiara iray nandona mafy azy avy ao aoriana. Nianjera ilay niharam-boina ka naratra mafy teo amin’ny sorony. Nirifitra nandositra kosa ilay fiara nahavanon-doza tamin’io fotoana io. Tamin’ny fotoana nahatongavan’ny polisy teny an-toerana, nentina namonjy hopitaly ilay raim-pianakaviana naratra. Noho ny ratra nahazo anefa, tsy afaka niasa nandritra ny 45 andro izy araka ny baiko nomen’ny mpitsabo. Nitohy hatrany ny fanadihadiana nataon’ny polisy hikarohana ilay fiara nandositra ka tamin’ny alalan’ny potik’ilay fiara tavela teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza no nahafahan’ny polisy nitondra fanadihadiana hatrany amin’ny fahitana ny tompon’ilay fiara. Nosamborina ilay tovolahy nitondra ilay fiara sy nandona ilay mpitondra moto ary niaiky ny heloka vitany izy.Jean ClaudeL’article Anosy: tratra ilay lehilahy nandona olona tamin’ny fiara a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasa: tetikasa 27 ho fanavaozana ny ladoany malagasy
Ny 12 hatramin’ny 14 oktobra lasa teo ny nanatanterahana fivoriana ampitain-davitra ifanakalozan-kevitra an-tsary (virtuelle) teo amin’ny Fitantanana ny fadintseranana sy ny mpiara-miombona antoka mpamatsy vola maromaro.Nisahana ny fivoriana ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny ladoany (OMD), izay voalohany eo amin’ny tantaran’ny fadintseranana malagasy, nankatoavin’ireo mpitantana ambony, ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombona antoka. 27 ny tetikasa ho fanavaozana ny ladoany ka nampahafantarina sy niadin-kevitra ny 17, nahitana mpandray anjara sy famatsiam-bola, hotanterahina manomboka ny 2021. Ny 10 ambiny, mandeha miandalana eo ny fanatanterahana azy hatramin’ny 2023.Mifandray avokoa ireo tetikasa ireo ho antoky ny fampandrosoana, iarahan’ny fadintseranana amin’ireo mpiara-miombona antoka mpamatsy vola (FMI, BM, Bad, USAID,…). Hisy fivoriana mialoha ny faran’ny taona 2020 hiarahana amin’izy ireo handrafetana farany ny fiaraha-miasa. Fanoitra iray lehibe ny ladoany, nampahalala ny paikadiny 2020-2023, fanavaozana mifanaraka amin’ny laminasa fampivoarana nosoritan’ny fitondram-panjakana ankehitriny.Fiaraha-miasa fanjakana sy tsy miankinaFampandraisana anjara tsy misy ankanavaka ny fitantanana ny atao, miezaka hatrany ho fampiharana ny tetikasa rehetra. Mampiasa sy mitady araka izay eo am-pelatanana, manatanteraka ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina. Mila fiarovana sy fampandehanana ny toekarena ao aminy ny firenena isanisany amin’izao fotoana izao, noho ny valanaretina mamely ny toekarena maneran-tany. Tsy afa-miala amin’izany i Madagasikara miezaka manome vahana ny indostria eto an-toerana, ny famoronana asa hahatojoana ny fahavitantena.« Miaraka isika, manova endrika ny ladoany malagasy ho fitaratra amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana hafa », hoy ny tale jeneraly, i Lainkana Zafivanona Ernest, sy ny sekretera jeneralin’ny OMD, i Kunio Mikuriya, manohana ny eto an-toerana. R.MathieuL’article Fiaraha-miasa: tetikasa 27 ho fanavaozana ny ladoany malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Maty voatifitry ny dahalo nandritra ny fanarahan-dia omby very ny miaramila kilasy voalo­hany, i Arison Nandraina Christophe, avy ao amin’ny 2BIA Tsiroanomandidy, afakomaly tolakandro. Latsaka tao anaty vela-pandriky ny dahalo izy…“Ho an’ny Tanindra­zana”! Lavo am-perinasa noho ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ity miaramila avy ao amin’ny 2BIA Tsiroanoman­didy ity. Lavo nandritra ny fifandonana raha nanara-dia ahafahana mamerina ny om­bin’ny mponina nangalarin’ny dahalo izy, niaraka tamin’ny fokonolona. Araka ny fampitam-baovao voaray, nitran­gana asan-dahalo nahery vaika tao Miandrarivo, kaominina ambanivohitr’i Belobaka, distrikan’i Tsiroanomandidy, afa­komaly tolakandro.Raha vao nahare izany ireo miaramila mpampandry tany amin’iny faritra iny, nanao ny fanarahan-dia niaraka amin’ireo fo­konolona ao an-tanàna. Nifa­nehatra ireo dahalo sy ireo mpanara-dia ary tafalatsaka tao anaty vela-pandriky ny dahalo ny miaramila kilasy voalohany, i Arison Nandraina Christophe. Voalaza fa efa nianjera tamin’ny tany izy no mbola norarafan’ireo dahalo tifitra variraraka ihany. Na teo aza anefa izany, afaka namaly tifitra ireo dahalo ihany ireo miaramila mpanara-dia, saingy tafaporitsaka ireo malaso.Natao veloma ara-miaramila teny amin’ny Capsat…Efa nampiakarina aty an-dRenivohitra ny fatin’ity miaramila lavon’ny malaso ity. Ho fanaovam-beloma sy ho fa­nomezam-boninahitra farany azy, nasondrotra ho amin’ny laharam-boninahitra kaporaly izy ary notolorana ny mari-boninahitra “Chevalier de l’ordre nationale”. Teny amin’ ny Capsat Fiadanana, toerana niasany, no nanaovana ny la­nonana ka nitarika izany teny an-toerana ny lehiben’ny Eta­mazaoron’ny Tafika mala­gasy, ny Jly Rabenaivoarivelo Jean Claude. Maneho ny fiaraha-miory ary mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany sy ireo olona akaiky azy ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena. Na eo aza izao fahafatesana miaramila izao, mi­tohy hatrany ny asa fampandrian-tany ataon’ny miaramila any amin’iny faritra Bongo­lava iny.Jean ClaudeL’article Miaramila iray maty tao anaty fifandonana mahery vaika : efa lavo tamin’ny tany, mbola norarafan’ny dahalo tifitra a été récupéré chez Newsmada.